ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 6.8 ဒဿလိုမိန်းမ လှလှရီ
6.8 ဒဿလိုမိန်းမ လှလှရီ
ပွဲခင်းနဲ့ အိမ်က ကပ်နေတာမို့ အသိမိတ်ဆွေတွေ အပေါ့အပါးသွားချင်ရင် အိမ်ကိုပဲ လာကြတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ညီအမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့က ခရစ်စယာန်တွေ။ ပေါ်တူဂီ ငဇင်ကာရဲ့ မျိုးဆက်တွေ။ ရွာမှာ သူတို့ကို ဗရင်ဂျီတွေလို့ ခေါ်တယ်။
အကြီးမက ကျွန်တော်နဲ့ အတန်းတူတယ်။ အတန်းထဲမှာလဲ ရှေ့နောက်ထိုင်ကြတယ်။ လှလှရီလို့ ခေါ်တယ်။ သူ့ညီမက မြင့်မြင့်ရီ။ ညီအမနှစ်ယောက်လုံး ချောတယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ ဇာတ်စင်ဆောက်ကတည်းက သူတို့ထိုင်ဖို့ အိမ်ကတန်းလျားတစ်ခု ပွဲခင်းထဲမှာ နေရာဦးထားရတယ်။
သူတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်က ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့ အတော်ဝေးတယ်။ လှလှရီနဲ့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းမက သမီးရည်းစားမကျ ဖြစ်နေတယ်။ သူက စာညံ့တယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ဆရာ။ လက်ကိုင်ခေါင်းပုတ်လောက်တော့ သူက မပြောတော့ဘူး။ (အဟတ်ဟတ်)
ပွဲခနနားချိန် ညီအမနှစ်ယောက်လုံး အပေါ့သွားဖို့ အိမ်ကိုလာတယ်။ တစ်ယောက်တစ်လဲ အိမ်သာတက်ကြတယ်။ မြင့်မြင်ရီအိမ်သာထဲ ၀င်တဲ့အချိန် လှလှရီကို ကျွန်တော်ရုတ်တရက်ဖက်နမ်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ သူမ ငြိမ်နေတယ်။ အနမ်းလေးတွေက ချိုမြိန်လိုက်တာလို့ ကျွန်တော်ကပြောတော့ ချိုမှာပေါ့ ခုလေးတင် ထန်းလျှက်ရည်နဲ့ မုန့်လက်ကောက်စားထားတာလို့ သူမက ပြန်ပြောတယ်။ (ချိုမြိန်သော အနမ်းဖြစ်ချင်ရင် ချစ်သူ့နှုတ်ခမ်း ထန်းလျှက်ရည်သုတ်ပြီးနမ်းကြပေါ့ဗျာ.. ကျွန်တော်က ကိုယ်တွေ့..)
မြင့်မြင့်ရီဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်နေပါစေလို့ ကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမိန်းမ ၀မ်းသိပ်ကောင်းတယ်။ အီးအီးမှ သုတ်ရဲ့လားမသိဘူး။ နှစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ အိမ်သာကဆင်းလာတယ်။
နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နဲ့ လှလှရီ တရားဝင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက မိန်းမ ဒဿဂီရိပဲ။ မျက်နှာများလွန်းတယ်။ ၀င်းနိုင်ဦးနဲ့လဲ ကြိုက်တာပဲ။ မျိုးသန့်နဲ့လဲ အီစီကလီပဲ။ ကျွန်တော်တို့အချစ်က အရမ်း ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်တယ်။ နောက်တော့ ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြီးသွားခဲ့ကြတယ်။ အခုအချိန်အထိ လှလှရီက အပျိုကြီး။ ကျွန်တော်မိန်းမမရခင် ရွာကိုပြန်တိုင်း သူမနဲ့ ကျွန်တော် "ကွယ်မေ့.. တွေ့သေအောင်လွမ်း.. " ဇာတ်ကကြတယ်။
ကျွန်တော် ရွာပြန်ရောက်တယ်ကြားရင် သူမက စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ အိမ်ဘေးနားပေါက်ချလာတယ်။ မိန်းမနောက်ပိုးလို့ ခေါ်ရင် ရိုင်းမယ်နဲ့တူတယ်။ ဟဲဟဲဟဲ... လျှောက်ပြန်သံပေး ပေါင်ပွန်း ခြေသလုံးကြီးပေါ့ဗျာ။ စက်ဘီးနဲ့ကိုး။ ဒါပေမယ့် သူက အိမ်ကိုတော့ မ၀င်ဘူး။ အိမ်ဘေးကပဲ အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖြတ်နေတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ တစ်ရက် အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း မောင်မျိုးသန့်ရယ်ပေါ့။ ရွာထဲသွားရအောင်ကွာ ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အိမ်တံခါးနားရောက်တဲ့အချိန် လှလှရီ.. စက်ဘီးစီးလာတာ မြင်လိုက်ရတယ်။
ဟေ့ကောင်.. သွား.. သွား.. အိမ်ထဲမှာ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင် နေ.. မြန်မြန် ဆိုပြီး မျိုးသန့်က ကျွန်တော့်ကို ပြန်တွန်းလွှတ်တယ်။ ကျွန်တော်လဲ အိမ်ထဲပြန် စောင်ခြုံပြီး ကွေးနေလိုက်တယ်။ လှလှရီကို မျိုးသန့်က ကျွန်တော်အတော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်... အချိန်ရရင် ၀င်ကြည့်ပါဦးလို့ စက်ဘီးတားပြီးပြောတယ်။
စက်ဘီးဆင်းတွန်းပြီး လှလှရီအိမ်ထဲဝင်လာတယ်။ သူ့ဖိနပ်သံကို ကျွန်တော်နှလုံးခုံသံက ဟာမိုနီလိုက်နေတယ်။
ကျွန်တော်အိပ်နေတဲ့နေရာနားကို အရောက်မှာ .. "နေ မကောင်းဘူးလား ." လို့ တုန်တုန်ရီရီနဲ့မေးတယ်။ အိပ်ရာဘေးက စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာ သံလိုက်စက်ကွင်းများအကြောင်း စာအုပ်ထဲက စာမျက်နှာတစ်ချို့ လေအဝှေ့မှာ တဖျတ်ဖျတ်မြည်နေတယ်။ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံကို ဖွင့်ပြီး ... " ဟုတ်.. တယ်.." လို့ တိုးတိုးလေး ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်။ သူမရဲ့ လက်ဖ၀ါးနုက ကျွန်တော့်နဖူးပြင်ဆီ မထိခလုတ်ထိခလုတ် ရောက်လာတယ်။
" ဟယ်.. တော်တော်ပူနေတာပဲ .." လို့ သူမက မပွင့်တပွင့်ပြောတယ်။ အချစ်သည်.. အမျိုးသမီးများ၏ လက်ကို အေးစက်စေပြီး အမျိုးသားများ၏ နဖူးကို ပူလောင်စေတတ်တယ်ဆိုတာ.. သူမ မသိဘူးထင်ပါရဲ့။ အဲဒီအချိန် လေကြမ်းတစ်ချက် ဝှေ့တိုက်လိုက်တယ်။ သံလိုက်စက်ကွင်းများ စာအုပ် စားပွဲပေါ်က လွှင့်ပါသွားတယ်...။
"အို ဘိက္ခဝေ.. ချစ်သားရဟန်း တို့.. ကိလေသာတို့သည် ပူလောင်ခြင်းသဘော ရှိကြကုန်၏ ." ဆိုတဲ့ ခပ်ဝေးဝေးက တရားသံ က လေနဲ့ အတူ လွင့်ပျံ့လာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရွာက တက္ကသိုလ်တက်တာ သိပ်များများစားစားမရှိပါဘူး။ လက်ချိုးရေလို့ ရတယ်။ လှလှရီတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ထွန်းထွန်းမင်း ဆိုတဲ့ ငနဲလဲ တက္ကသိုလ်တက်နေတယ်။ ရွာမှာတုံးက ခပ်တန်းတန်းပါပဲ။ အဝေးမှာ တွေ့ကြတော့ ထုံးစံအတိုင်း ခင်ရာဆွေမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် မကြာခဏ တွေ့ဖြစ်ကြတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အတူထိုင် အရက်အတူသောက်ပေါ့။
အရက်မူးတော့ ကျွဲခိုးပေါ်တော့တာပဲ။ မူးမူးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ လှလှရီ အကြောင်း သူ့ကို ပြောမိသွားတယ်။ အဲဒီမှာ ပြဿနာတက်တော့တာပဲ။ အဲဒီငနဲနဲ့ လှလှရီကလဲ ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်နေသတဲ့။ နောက်မှ သိရတာပါ။ အဲဒီကောင်က ကျွန်တော်နဲ့ လှလှရီ ဘာညာကွိကွဖြစ်ကြောင်းရယ် ကုန်စင်ကို မန္တလေးကနေ ရွာကို နတ်သံနှောပြီး စာလှမ်းရေးတယ်။ ဦးတိုက်တာက လှလှရီအဖေဆီပဲ။ စာအဆုံးမှာတော့ အမည်မဖော်လိုသူ တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦး စတိုင်မျိုးနဲ့ နာမည်ဝှက်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သိတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဒီကောင်နဲ့ မင်းသိန်းပဲ သိတာ။ မင်းသိန်းက ပြောမယ့်ကောင်မှ မဟုတ်တာ။ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီအကြောင်းကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မတင်ဘဲ မနေနိုင်ဖြစ်ရတယ်။
လူငယ်သဘာဝကို.. အပြစ်လို့ မယူဆပေမယ့်.. အဲဒီသဘာဝကို လူတကာ သိသွားအောင် လုပ်မိတာကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်ရတာပဲ။
လှလှရီက မင်းသိန်းကို ပြော။ မင်းသိန်းကတဆင့် ကျွန်တော့်ဆီ အဲဒီသတင်းရောက်လာ။ နောက်ဆုံးတော့ စာရှည်ရှည် တစ်စောင်ရေးပြီး လှလှရီကို တောင်းပန်လွှာဆက်သလိုက်တယ်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို သူမကခွင့်လွှတ်တယ်..။ သူမအဖေကလဲ ခပ်တန်းတန်းလေး ဖြစ်သွားတာက လွဲပြီး မေးထူးခေါ်ပြောမပျက်ခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့မောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်စာသင်ပေးရတဲ့ အထိ အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်။
ဒါပေမယ့်.. ဘ၀ရဲ့ အမဲစက်တစ်စက်အဖြစ် စွန်းထင်ကျန်နေဆဲပါ...။
သြော်.. ဘာလိုလိုနဲ့ ရွာကို ပြန်မရောက်တာ ခြောက်နှစ်ထဲ ရောက်ပါပကော။
Posted by navana at 7:04 AM
Labels: 06 မြသီနဲ့ ရွာဘုရားပွဲ
7.1 ထန်းတောနဲ့ နွေတမ်းချင်း
7.2 အဘိုးနဲ့ အဘွား
7.4 အကို၊ Globalization နဲ့ AIDS
6.1 ရွာတန်ဆာလေး မြသီ
6.3 ဘိုဖင်နှိုက်ပြီး ဘီယာသောက်ခြင်း
6.5 ဗလာဇာတ်နဲ့ မင်းသမီးချောင်း
6.7 ဗလာဇာတ်ပွဲ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲ